Iikhosi-zeGeospatial - Geofumadas
I-AulaGEO yenza le khosi igxile kuphuhliso kunye nokusebenzisana kwedatha yendawo ekuphunyezweni kwe-Intanethi. Kule nto, izixhobo ezintathu zekhowudi zamahhala ziya kusetyenziswa: I-PostgreSQL, yokulawula idatha. Khuphela, ufakelo, uqwalaselo lwecandelo...
Okwangoku baninzi abanomdla wokucubungula inani elikhulu ledatha ukutolika okanye ukwenza izigqibo ezifanelekileyo kuzo zonke iindawo: indawo, intlalontle okanye iteknoloji. Xa idatha evela imihla ngemihla inikwa unyango olufanelekileyo, ...
Funda indlela yokusebenzisa i-QGIS ngokuzilolonga ngezandla kwiiNkqubo zoLwazi lweJografi usebenzisa i-QGIS. -Yonke imithambo onokuyenza kwi-ArcGIS Pro, eyenziwe ngesoftware yasimahla. -Ngenisa idatha esuka kwi-CAD ukuya kwi-GIS -Ukwenziwa komxholo ngokusekelwe kwiimpawu -Izibalo ezisekelwe kwi...